ugu danbeyn duulaankii ayaxa oo soogaaray Gobol muhiim u ah wax soosaarka Somaliya iyo dowlada somaliya oo aan ka hadlin – Kismaayo24 News Agency
ugu danbeyn duulaankii ayaxa oo soogaaray Gobol muhiim u ah wax soosaarka Somaliya iyo dowlada somaliya oo aan ka hadlin
by admin 26th December 2019 0243
Muddooyinkii dambe deegaanno ka tiran Galmudug ayaa aad looga cabanayay Ayax farabadan oo ku habsaday dhul ballaaran oo ku yaalla deegaanada maamulkaas,iyada oo uu xaalufinayay Beeraha.
Deegaanada Somaliland iyo Galmudug ayaa qaabab kala duwan loola dagaalamay Ayaxa oo fara ba’an ku hayay dhulka Beeraha ah iyo kan loo daaqsin geeyo xoolaha,iyada oo tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyayna uu ayaxu ka guurayay deegaanada Maamulka Galmudug.
Dhinaca kalana saacadihii la soo dhaafay waxaa dadka deegaanku ay soo weriyeen in Ayax guuraya lagu arkay deegaano ka irsan maamulka Hishabeelle kuwaas oo aad ugu dhow magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle.
Shalay ayay aheyd markii xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya uu sheegay in Ayax badan oo uu ku wajahanyahay deegaanno hor leh oo ka tirsan gobolada dalka.
Dhinaca kalana waxa uu sheegay Xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow in Ayaxa haatan laga cabsi qabo inuu ku dego dhul beereed badan oo ku yaalla Gobolada Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Baay iyo Bakool.
Golaha Shacabka oo ansixiyay sharciga shirkadaha iyo kan Maareynta Maaliyadda Guud.
TOP NEWS:- Kenya”waxaan Dilnay Sargaalkii Hogaaminayay Weerarkii Ceel-cadde”
Tifaftiraha K24 22nd January 2016
Daawo: Axmad Madoobe oo Kismaayo Munaasabad Sagootin iyo Shahaado gudoonsiin ugu Sameeyay Xildhibaanada Labada Aqal ee Jubbaland